Dhuma Dhuma naMarian – Vanoda Zvinhu
Musi uyu ndainge ndisina kuenda kubasa nekuti, ndanga ndakumbirwa namukoma vari kuNamibia kuti ndiyendesere mwana wavo mari nezvimwe zvekushandisa ku boarding school kwaaidzidza. Saka ndakatomuka zvangu kuma 9 semunhu anga asiri kuenda kubasa.
Ndapedza kugeza ndakangoti rega ndimhanye pa mashops kunotsvaga tumazanda nekachingwa kuti ndiite ka breakfast ke chopaz chopaz ke boyz imwe iyaiya.
Pandakati ndichingobuda paghedhi, dhuma, dhuma na Marian. Marian aigara about 4 or 5 houses kubva pandaigara,saka ndaiwanzomuona makuseni ndichienda kubasa pa ma kombi. Or dzimwe nguva pandainge ndine mota yekubasa ndaimupa lift kupinda mu town. Ndipo chete paiperera nyaya naMarian. Saka musi uyu ndakatomubvunza kuti seyi ainge asina kuenda kubasa, akandiudza kuti akanga ari pa off kwe mazuva matatu, apa aitoenda hake pamashops kunotsvaga airtime.
Takafamba hedu tese, apa ndanga ndisina kana nyaya naye, saka ndakapedzisira ndaakumuudza kuti inini wacho ndanga ndisiri kuenda
kubasa coz paive ne some family issue I needed to sort out. Iye akangoti, iri bho but akaramba achibvunzisisa kuti aimbova ma “family issues” emhando whayi aitoda kuti munhu arege kuenda kubasa. Ndakazomuudza detail rekuendesera mwana mari ne ma groceries, ku Chishawasha ( St Ignatious).
Pekutanga ndakafunga kuti aida zvekutamba neni, asi ndakatozoona kuti anga atoita zviya zvinonzi adenha mangwiro otokunya, nekuti akatoti aizondimirira in about 30 minutes. Ndichibudawo paghedhi ndakatoona, eh eh inga mai yacho ine chivindi chiri serious yanga yatomira paghedhi apa yakapfeka jean ranga rakati mbambamba ne zviboda zvese izvi, plus ka blouse kaanga akapfeka waitoona bra yaanga akapfeka kuzoti iwo mazamu acho, akomanaka zvimwe ngatingoonayi chete. Mafuta ne perfume yaanga azora zvaiburitsa kamwe kakunhuwirira kasina mukare akaona.
Takabatirana ka medium size mornach tichienda kumakombi, apa taingotaura general nyaya, dzakaita sedzepeturu iri kunetsa, mari shoma iri kutambiriswa vaseenzi, plus nyaya dzevanhu vari diaspora, nezvimwewo. Takaona Mwana zvakanaka palunch ndikamusiira goods ne mbongo yanga kuna blaz ndakazomupawo ka 5 thaza, kekujuta pane gero kuti rione kunge ndiri dikez ine care. But yakatambika pandakaona kuti Marian ari kuda kuuyawo neni ndakafano bvisa 5 thaza pamari ye mupfanha, ndikaiisa paside kuti iite kunge yabva kwandiri. Mupfanha ndakamupa breakdown yetransaction yacho and akaibata fast-Semuchinda ndakatozoona kuti anetenge tsotsi worse mufana wacho because, kukasika kwaakaita kukabira hakuna kundigutsa. Ndakangoti akatora ruoko rwa bamdiki haiwa hameno nekuti bamdiki yacho yanga iri saskum order hombe chaiyo.
Pakudzoka manje musikana akashingirira nyaya yekuti aida kunditengera drink. Inini ndingati zvaizoita nyore kudayi taigona kuno dhaira kudhen iye akatoti anga asina dambudziko nazvo. Pese paiitika izvi vashe vangu mubhurugwa vanga vanzwa nekumira nekurara nekumira nekurara, kusvikira vatombozvisvipira svipira. Akatenga 8 macan e Zambezi ne 4 Mabohlingers. Kuti ndichimubvunza kuti ko aiziva seyi kuti ndinorova Zambezi, ndakangoti ehh, charakupa denga tenda, ukabvunza zvakawanda murungu angasvibe moyo. Ndakazojutirawo kutenga ka pork kuti tonobhaizira kugagocha tichinwa hedu.
Apa manje ndanga ndaane nyota heavy, I think guys know the feeling-like kana uchiita charm musikana usually people react differently – some sweat, some vanobuda masiriri kunga imbwa iri kunetsana ne bhonzo, vamwe ndovanochinja step, vamwe vanosura-ehe- kusura chaiko, asi ini manje ndinopera mate mukanwa. Ndozvakaitika apa. Takasvika muroom yangu, it was a very big one but yanga yakapartitionwer on one side ne wardrobe then the other side ne kitchen unit. Saka waiti uchipinda it was a makeshift kitchen, then ka lounge ke bhayiz, then kuseri kwaiva ne “bedroom”. For a bachelor it was 5 star, and patakapinda I could see kuti musikana haasi kunyanyoshora hake zvaaiona.
Manje zvinhu zvese zvaiva ku “bedroom” side, Radio, TV, ne DVD Saka was struggling to take these things to the lounge side, but Marian akanditi ko ndaizvinetsereyi, since taikwanisa kungoonera kana kunzwa music kubedroom side. Iniwo ipapo ndakangoti iya mai ava vari raiti raiti shuwa shuwa here. Anyway takanwa hedu gas, I did not know kuti she could talk and laugh like that, ende apa aiti akasekerera so mwana aibva anyanyonaka zvekuti ndaitotyira kuti akazoramba achiseka so aitozopedzisira anyangara because anga akanaka kusvika pekupedzisira. Saka kuzoramba achinakiswa nekuseka aitozonyangara chete.
Anyway, takaona hedu 1 movie, she was almost done with her fourth beer and I excused myself kuti ndicheke kanguruve kandaaa ndaisa muoven. She offered to come and assist. Ndakamira pastove ndakaona munhu auya nechekumashure, akandimbundira ndakatarisa kumberi akaisa maoko ake just on my belly and I twitched slightly coz maoko ake akaita kunge aino dzika nechekuzasi kwebande.
Chakandivhundutsa ndechekuti ndaitya kuti zvimwe akaguma vashe vaye nekumira kwavanga vakaita pamwe aitozorowha ne buka because kumira kwakadaro kana vanwa overdose yevhukavhuka haiisvike ipapo. Ndakangoita kanervous chuckle then proceeded to check the oven, yanga yatoibvawo zvayo. Marian akatora mahanyanisi nematimati, nemagaka andaiva ndaisa muplate pamusoro pefiriji kwaakua slicer slicer iwe. Then we went back kubedroom side. Tanga taakungo player music chete manje.
Mumwe mweya wakamboti chirega ndingotaura zvechirango kuti ndipihwe
zvinhu formally, but ndakatozoona kuti uku kunenge kwaakuda kuraura hove iri muaquarium, apa muri mumba futi. Ndakajuta kumudyisa tu matimati nemagaka, ndikaona mwana achiita kusvisvina tugaka tuya zviya zviri enticising apa aiti when I get my fingers on her lips she would suck them.
Ndakasvikorara pamakumbo aMarian, musikana akatanga kundipuruzira ne
chepa chest apa achivhura ma button eshirt yangu. Apa ruoko rwangu rwakanga ruchingobhaizira kukwenyezera musana ndakaisa ruoko mukati meblouse.
Ndaka kochonora kawaya kanobata bra nechekumusana, ndikanzwa dairibord yamai ichisununguka, asi kwete zvekuzoti gojono. Mwana aiva nezamu kuita kunge maorange mahombe so rakanyatsotenderera ende kanyatso kacho kaiita kunge kakagadzirwa pako kega kubva kazonamirwa after zvimwe zvese.
Ndakamutakura ndokumuradza pamubhedha apa aingoti uhhh ohhhh uhhh arrggggghhhh, ndakamuradzika akatarira mudenga ndikati chaa kwenyu amai, zviya zvekunzi, haa hanzi beche kasmero kuita seyi, ndakananzva
beche sebeche, apa anga achiti nyakata kudhara, ndaiita zvekutopinza rurimi
mukatikati chaimo, ipapo ndipo payi wayinira kupfuura zvisikana zvinotamba
pamaVideo a Sean Paul. Ndakayamwa gambi ndigoyamwa apa maoko ari busy kupurizira mazamu.
Ndakazonzwa aakuti ” shaaaaa, do it now, please, please”. Ndikati unonyeba haikona ndiwe wandiyamba, ndakambo mufinger kwe a minute or so ndokubva ati ndimbomupa ne Burkina Fasso. Mwana akafongora munoziva gambi kuuya kumusoro kuita kunge paya pane Ka LNB kesatellite dish. Ini ndikati ndouya amai, kunoiti pfe mwana akadzvova kunge mombe yadzipwa ne joki, ndikafunga kuti ndacommita murder pano. Ndakazonzwa, futi oti “Eish dear you are so hard”. Ndikati hoo uchataaura chirungu chese nhasi, naro gambi, apa nekutunda kwandanga ndamboita I knew kuti ndinombo chovha chete.
Next story Kusvigwa kwandakaitwa kuseminar(copied)
Previous story Kusvira Mukadzi waLandlord